“ လေးပါလေးပါ ၀ င်သောသတင်း၊ ပုဒ်မနှင့်ပတ်သက်သည့်ပျင်းစရာသတင်းဆောင်းပါး၏ခန္ဓာဗေဒ” (Pornhelp.org) - သင့် ဦး နှောက်သည်အပြောက်
“ လေးပိုင်းခွဲခြားမှုရှိпорနှင့်ပတ်သက်သည့်ပျင်းစရာသတင်းဆောင်းပါး၏ခန္ဓာဗေဒ” (Pornhelp.org)
လူတိုင်း, ထနားထောင်ပါ။ ဤတွင် PornHelp မှာကျနော်တို့များမှာ မဟုတ် "အတု" သို့မဟုတ်အဖြစ်သတင်းတံဆိပ်ကပ်ဖို့ရှို "စစ်မှန်သော။ " မမဆိုသည့်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ ကျနော်တို့ရုံသူတို့အား tags များ uselessly လျှော့ချရေးကိုရှာပါ။ နိုင်ငံသားများကျနော်တို့ကလေလှိုင်းနှင့်အင်တာနက်ကျော်ကိုစုပ်ယူသတင်းအချက်အလက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအပိုင်းအစအကြောင်းကိုပြင်းထန်စွာစဉ်းစားရန်အဖြစ်သူတို့လညျး-အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်နှင့်တာဝန်လက်နက်ချ။ ငါတို့ကဲ့သို့စစ်မှန်သောသို့မဟုတ်သစ္စာကိုဖျက်ကိုလက်ခံသောအရာကိုဆုံးဖြတ်ရန် - မဟုတ်သူတစ်ဦးဦးသည်အခြားရဲ့ Facility တံဆိပ် - သတင်းနှင့်ထင်မြင်ချက်၏တာဝန်ရှိစားသုံးသူအဖြစ်ကျနော်တို့အမြဲတမ်းစပီကာရဲ့အရင်းအမြစ်, နည်းလမ်းများနှင့်တွန်းအားမေးမြန်း, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်မှီခိုအတွက်ယုံကြည်ပါတယ်။
ငါတို့သည်အချို့သောဂျာနယ်လစ် '' တဦးတည်းတဖက်သတ် porn စွဲအပေါ်ကြာမြင့်ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာကျွန်တော်ရှာတွေ့အကြောင်းကိုဤနေရာတွင်ရေးတဲ့အခါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့အလုပ် "အတုသတင်း။ " ဝေးကနေတောင်းဆိုနေထည့်သွင်းဖို့အလျင်အမြန်။ ဘယ်အချိန်မဆိုတစ်ဦးသတင်းစာဆရာသူတို့အရေးပါသောနှင့်အရေးပါသောအအရပ်ဘက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုအထောက်အကူပြု, porn စွဲဆွေးနွေးရန်ကီးဘုတ်မှလက်ချောင်းများတတ်၏။ သူတို့ဒီတော့လုပ်နေလုပ်နေကြောင်း, ငါတို့ကိုရန်, In-နှင့်-of သူ့ဟာသူကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုခံထိုက်သောသတင်းရှိပါသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒါကြောင့်လည်းသူက porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမှကြွလာသောအခါ, များစွာသောစာရေးဆရာများသတင်းအချက်အလက် sourcing နှင့်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်မီးမောင်းထိုးပြအဘယ်သို့အချက်အလက်များဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်စေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့သတိထားအလုပ်လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ကိုပုံရသည်။ ကျနော်တို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသရုပျဖျောဖို့, ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ deconstruct လုပ်ရန်တာပေါ့ အဆိုပါ Daily Beast ၌ဤနံနက်သည်ထင်ရှားသည့်ဆောင်းပါး တိုင်းပြည်အနှံ့ကျောင်းဝင်းကွန်ရက်များကနေညစ်ညမ်း filter မှမကြာသေးမီကကောလိပ်ကျောင်းသားများဦးဆောင်သောလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကို။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရေးသားသူအပေါ်ကောက်နေမဟုတ်ပါဘူးဒီလေ့ကျင့်ခန်းပို့ချအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့, အမ်မလီ Shugermanဒါမှမဟုတ် Daily Beast, အထူးသဖြင့်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်ကာလတဆယ်နှစ်လုံးကိုလကျော်ဖတ်ပြီးသွားပြီအပိုင်းပိုင်းမဆိုအရေအတွက်အားဖြင့်ဤသို့ပွုနိုငျသညျ။ Shugerman ရဲ့ Daily Beast ဆောင်းပါးကျနော်တို့ကယနေ့အပြည့်အဝကုသမှုရရှိသွားတဲ့အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောညစ်ညမ်း၏ခေါင်းစဉ်အပေါ်သတင်းစာပညာညှဉ်းဆဲခြင်းကိုတစ်မရှိခြင်း၏ကိုမြင်ရပါတယ်ရုံလတ်တလောသာဓကဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, porn နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းတစ်ခုရင်းမြစ်မှရသည့်, မလိုအပ်ဘဲလျှော့ချရေး, ဘက်မှာပျင်းရိသတင်းကို item ၏ခန္ဓာဗေဒလေးအစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်ရှိပါတယ်။ ခံစားပါ။
ဆောင်းပါးသည်စွဲဆောင်မှုရှိသောခေါင်းစဉ်နှင့်“ ကောလိပ်ယောက်ျားများ” မှ“ ရီပတ်ဘလစ်ကန်များနှင့်အစွန်းရောက်အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများ” မှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွဲမက်နေသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်စတင်သည်။ အရသာရှိတဲ့အသံ ဒါဟာဒီစာသင်အစောပိုင်း (တိကျစွာ) အစီရင်ခံရန်ဆက်လက် Notre Dame မှာအထီးကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးအိတ်ဖွင့်ပေးစာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ တက္ကသိုလ်ထက်ပို 1,000 ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုသူတို့ခေါ်ဆိုခအတွက်ပူးပေါင်းအကြောင်း, porn ပိတ်ဆို့ဖို့တက္ကသိုလ်ကိုတောင်းဆိုနေတာနှင့်တိုင်းပြည်အနှံ့ကကျောင်းပေါ်ယောက်ျားမိန်းမတို့လည်းသူတို့၏ကျောင်းများမှာအလံကိုထူယူကြပြီဖြစ်သည်။ ဝေးလေကောင်းလေ။
ထိုအသေးတစ်စက္ကန့်အပေါ်ဖိကိုင်ထားပါ။ လူတို့သညျဆိုပါက နှင့်အမျိုးသမီး ထိုကျောင်းများမှာအဘယ်ကြောင့်အမည်ရဆောင်းပါး "ဒီကောလိပ်ယောက်ျားများကျောင်းပရဝုဏ်အပေါ် Porn ပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်" သည်အဘယ်ကြောင့် lede သာ "အကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းခံရဖို့သွားခဲ့ကြသည်နဲ့တူပါကအသံအောင်ခဲ့ပါဘူး, ကျောင်းဝင်း wifi အပေါ်ညစ်ညမ်း filter မှအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ခေါ်ပြီ ကောလိပ်ကျောင်းယောက်ျား "? ဒါ့အပြင်မဟုတ် nit-ရွေးဖို့, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်စဉ်းစားကျောင်းဝင်း wifi filter မှဖြစ်ပြီးသူတို့ကျောင်းသားများကိုနေဆဲ porn ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်အသိအမှတျပွုဤကျောင်းသားများသည်တစ်နည်းနည်းများလွန်းအားကြီးသောတစ်ဦး "ကျောင်းဝင်းအပေါ်ညစ်ညမ်း [ရက်နေ့တွင်] ပိတ်ပင်မှု" ပြီးမြောက်ချင်သောအရာကိုတောင်းဆိုသည်မဟုတ် များပြားလှအခြားနည်းလမ်း? နောက်ဆုံးတော့ (သင်အောက်တွင်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်ကဲ့သို့), ထို lede ကျနော်တို့ပြောရမည်, ကနောက်ပိုင်းမှာရီပတ်ဘလစ်ကန်, သင်သိအဖြစ်သူတို့အားယောက်ျားဖော်ပြထားတယ်သောအခါ "ကောလိပ်ယောက်ျား" "ရီပတ်ဘလစ်ကန်" ကနေဝတ်လုံကိုယူပြီးနေကြသည်ဟုထဲမှာလှည့်စားတစ်ဦး tad ဖြစ်ပါတယ်။
ဟမ်။ တစ်ငါးစာ-and switch သည်နှင့်တူပုံရသည်။ ရဲ့အပေါ်ကိုဖတ်ကြကုန်အံ့။
အပိုင်းနှစ်: ချယ်ရီ-ထုတ်ယူခြင်းသိပ္ပံအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှု Narrative တင်းမာမှု
ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုခု Shugerman ရဲ့အပိုင်းအစအတွက်လာမယ့်ဖြစ်ပျက်။ သူမသည်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းဝင်း wifi filtering ကိုအဘို့ဆော်သြကျောင်းသားများ porn စွဲအကြောင်းကို၎င်းတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်လှဲမှားသောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ 2013 နှင့် 2014 ကနေနှစ်ခု unattributed လေ့လာမှုများကိုးကားပြီး Shugerman ကောလိပ်ကလေးတွေတကယ်သမျှသောအများကြီးအွန်လိုင်း porn ကိုမသုံးကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn ထိုကဲ့သို့သောကြီးတွေသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူးစောဒကတက်သည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ခိုငျလုံစစ်မှန်တဲ့တဦးတည်းအရာယနေ့ရှိတယ်ဆိုပါကကောလိပ်အရွယ်ကလေးတွေကိုအသုံးပြုသူလူဦးရေရဲ့တစ်ကြီးမားသောအဘို့ကိုပါဝင်ကြောင်းပါပဲ။ Shugerman ဖတ်မ အဆိုပါအတ္တလန္တိတ်အတွက်ကိတ်ဂျူလီယန်ရဲ့မကြာသေးခင်ကဆောင်းပါး လူငယ်များအစဉ်အဆက်ထက်လျော့နည်းလိင်ဆက်ဆံနေကြဘာဖြစ်လို့ကော? ဒါဟာ porn ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် '' ရင်းနှီးဘဝကဏ်ဍသို့ seeped ထားပြီးဘယ်လိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ နှစ်ခုလေ့လာမှုများ Shugerman အပေါ်မှီခိုနေသည်, သူတို့ရဲ့ကောက်ချက် (Shugerman သူတို့ကိုဖော်ပြထားတယ်မှာအနည်းဆုံးအဖြစ် ... ကျွန်တော်သူမကိုအပေါ်မှီခိုနေဟုပြော-ဒီတော့ဒီနေရာမှာသူမတကယ်လင့်များထောက်ပံ့ပေးမထားပါဘူးကတည်းက) ကျယ်ပြန့်-ရရှိနိုင်သဖြင့်ငြင်းခုံကြောင်းဖြစ်ကြောင်းမည်သို့ပင် သုတေသနလုပ်ငန်း မကြာခဏဖေါ်ပြခြင်း porn ကိုအသုံးပြုခြင်း is ဘုံ အနက် ကောလိပ်ကျောင်းအသက်အရွယ် လူများနှင့် ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်.
အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်ထို့နောက်ကျောင်းဝင်း porn filtering ကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ porn ထံမှကြောက်ရွံ့အနည်းငယ်သာရှိသည်သောအငြင်းအခုံ buttress နှစ်ခုထက်ပိုသောလေ့လာမှုများမှ alludes ။ 2007 (ဖနှင့်ဆက်စပ်မဟုတ်) ထံမှတစ်ဦးကလေ့လာမှု purportedly porn အမျိုးသမီးတွေဆီသို့အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားတွေကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူးဆိုပါတယ်။ အခြားလေ့လာမှု, 2014 ကနေညစ်ညမ်းစွဲစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည် "ရိပ်မိ" စောဒကတက်သည်။ (Shugerman ဒီလေ့လာမှုခဲ့ကြောင်း, သို့သော်ဖော်ပြရန်ပျက်ကွက် အခိုငျအမာ debunked နှင့်အခြေအတင်ဆွေးနွေးအထူးသဖြင့်သင်သိ, ရန် "ကိုရိပ်မိစွဲ" ၏ဆက်စပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း, အမှန်တကယ် စွဲလမ်း။ )
ထို Shugerman ကိုးကားသည် "သိပ္ပံ" ၏အတိုင်းအတာပါပဲ။ ဒါဟာကျောင်းသားများကြားမှသူမတစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ် "porn စွဲ" သူမအမှန်တကယ်အငယ်လူဦးရေအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် compulsive မျက်နှာပြင်အသုံးပြုမှုကျယ်ပြန့်သက်သေအထောက်အထားဆွေးနွေးရန်မီးမောင်းထိုးပြမှရှေးခယျြခဲ့သည့်လေ့လာမှုများအဘယ်သူအားမျှဖော်ပြတွေ့ဆုံမေးမြန်းအကြောင်း, အနည်းဆုံးပြော, ထူးဆန်းပါတယ်။ ဒါဟာသူမအဘို့ရှိကြမပါလျှင်အဖြစ် များစွာ-အပေါ်သို့-များစွာလေ့လာမှုများ၏ ကနေရှေးခယျြဖို့။ ဘာပဲအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဆောင်းပါးရိုးရှင်းစွာကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်ကိုးကားသောအရာကိုသာ tangentially ဆက်စပ်အချို့သောသုတေသနပြုဖို့သူ့ဟာသူ confines ။
အဘယျကွောငျ့ဖွစျနိုငျသလဲ ငံ့လင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြကြဘူး။ ကျနော်တို့ဂုဏ်နကနိုင်ငံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပုံစံမှအရာအားလုံးကိုလျှော့ချနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပြီးခန့်မှန်းပါတယ် ...
အပိုင်းသုံး: ဒါကတူဟောငျး, မောပန်းသစ်အယ်သီးသွန်းလောင်းပေး
... Aaaaaand ကျနော်တို့ညာဘက်ရှိကြ၏။
Shugerman လာမယ့်လက်ျာသည်နိုင်ငံရေးတံဆိပ်များ vs. လက်ဝဲ၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်ကျောင်းဝင်း wifi filtering ကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံတတ်၏။ သူမ၏ဘက်မှာအချို့အဆင်ပြေအချက်အလက်များရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သူမကအဓိကရှေးရိုးစွဲထုတ်ဝေဇာတ်လမ်းတက်ခူးနှင့်ဂျော့တောင်းမှာ "ရှေးရိုးစွဲ firebrand" (နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို) ကျောင်းသားများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။ သို့သျောလညျး, ဆောင်းပါးနည်းတူအလွယ်တကူနိုင်ငံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရောင်စဉ်၏အခြားဘက်မှာပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီနိုင်ဘူး။ (ဥပမာ, အထက်ကိတ်ဂျူလီယန်ရဲ့အတ္တလန္တိတ်ဆောင်းပါးတွင်ကြည့်ပါ, ဒါမှမဟုတ် ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရဲ့ဂေးစတားသတင်းကနေဒီတစ်ခု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာသည်မိမိရှာဖွေရေးနှင့် ပတ်သက်. အကြောင်းကောလိပ်-အသက်အရွယ်ပြဇာတ်ရေးဆရာရဲ့ဆုရတယောက်သောသူပြပွဲ porn စွဲနှင့်အတူရုန်းကန်နေစဉ်။ )
Shugerman ထို့နောက်တပြင်လုံးကိုကျောင်းဝင်း wifi filtering ကိုလှုပ်ရှားမှုပါးန Andrea Dworkin နှင့်ကက်သရင်း MacKinnon ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းကျောင်းသားအမျိုးသမီးရေးဝါဒီများထံမှအငြင်းပွားမှုများ coopts ကြောင်း porn အပေါ်ဘာသာရေးညာဘက်ရဲ့စစ်ရုံတစ် reboot ကြောင်းငြင်းခုံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံရေးထောင့်အပေါ်ကိုဆင်းနှစ်ဆတိုး။ constrast မှာတော့သူမက "ဒီနေ့သားအမျိုးသမီးရေးဝါဒီ" စောဒကတက် porn နှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းပျော့သွားတာကိုမရှိကြပေ။ သောအဖြစ်, uh, သင်သည်ထိုအကြောင်းကိုသေချာရှိပါသလဲ ကျနော်တို့တော်တော်လေးသေချာနေ အမျိုးသမီး Melissa Farley နှင့် GAIL ထမင်းစားခန်း သည်အတိုင်း, ထူးခြားတောင်းပန်မယ်လို့ Sara Ditum, ထမင်းစားခန်း၏ဟောင်းတစ်ဦးဝေဖန် '' သူဂါးဒီးယန်းနှင့်အခြားအဓိကစာပမြေားအတှကျရေးသားခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံရေးဝေါဟာရများအတွက်ကျောင်းဝင်း porn filtering ကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံ ချ. Shugerman နှင့်အတူရှိသည်ပြဿနာနှစ်ဆဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် / လက်ဝဲ, ရှေးရိုးစွဲ / လစ်ဘရယ် tropes သို့ porn သံသယ pigeonhole ့နိုင်အောင်ပျင်းရိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Shugerman porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးနှိုးဆော်သံဖော်ပြလက်ဝဲယိမ်းပီတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲရှာဖွေရန်မလိုအပ်လိမ့်မယ်။ ဒုတိယအချက်မှာ Shugerman သည်မိမိအလှုံ့ဆျောမှုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ် "The Daily Beast နှင့်အတူစကားပြောသူကို [အီး] အလွန်ကျောင်းသားခေတ်သစ်ညစ်ညမ်းထဲမှာဖော်ပြပါတယ်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများ၏အဆင့်ဆင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့" အဲဒီ။ ကတင်ပြထားပါတယ် ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံရေးရောင်စဉ်၏တစ်ခုသောနေရာ၌ချုပ်ထားပြဿနာနှင့်တူမထင်ထားဘူး။ အလွန်အနည်းဆုံးက Daily Beast နိုင်ငံရေးရှုခင်းဖြတ်ပြီး ambivalence ယောက်ျားမိန်းမတို့ porn ခေတ်သစ်လိင်ပုံဖော်အတွက်ဖြစ်လာသည်ဘယ်လိုနေရာအနှံ့နှင့်သြဇာနှင့် ပတ်သက်. ခံစားရအသိအမှတျပွုကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့လိမ့်မည်။
အပိုင်းလေး: အဆိုပါ Lede (ဖြစ်သင့်အဘယျသို့) သင်ျဂွိုဟျ
အဲဒီအစား "ကျောင်းဝင်းအပေါ်ပိတ်ပင်ထားမှု porn" ဖို့ "ကောလိပ်ယောက်ျားတွေ" ကလှုပ်ရှားမှု touting အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်သော Daily Beast ဆောင်းပါးနိဂုံးခြုပျ, သင်ကျောင်းဝင်း wifi filtering ကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံမြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏အရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှအတို shrift ပေးခြင်းအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးကဲ့ရဲ့ခြင်းလည်းဆိုရင်။ filtering ကိုပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲနည်းပညာအဖြစ်နိုင်မလား? ကအကူအညီနဲ့ရှာဖွေလျက်ကနေညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူရုန်းကန်သူတွေကိုတားဆီးတူသောမရည်ရွယ်သောအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိပါ့မလား ကအထောက်အခမဲ့စကားရပ်၏အခွင့်အရေးများကန့်သတ်ရန်မလား? ဒါဟာသူတို့ညစ်ညမ်းမဆိုဆွေးနွေးမှုကိုယနေ့အတွက်မွေးရာပါအရေးပါမေးခွန်းများကိုမြှင့်သောကြောင့်, Shugerman, သူမ၏အပိုင်းအစ၏အဆုံးဤအကြောင်းအရာများ left ကံဆိုးပါတယ်။
ညစ်ညမ်းသောသတင်းဆောင်းပါး၏အခြေခံခန္ဓာဗေဒအရဤတွင်သင်၌ရှိသည် - (၁) မှားယွင်းသော၊ (၂) အငြင်းပွားဖွယ်ရာများထုတ်လုပ်ရန်ချယ်ရီရွေးသုတေသန။ (1) နိုင်ငံရေး!; နှင့် (2) chumps အဘို့အဖွင့်ကဲ့သို့အပျော့စားဆက်ဆံပါ။ အခြားဆောင်းပါးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မစမ်းသေးပါ။
ဘယ်က porn ၏အများပြည်သူဆွေးနွေးမှုမှကြွလာသောအခါငါတို့ရှိသမျှသည်သတင်းအရင်းအမြစ်များမှပိုကောင်းထိုက်သောကွောငျ့, သိပ်မကောင်းဘူး။